ချစ်သူများနေ့၌ အချစ်ကြောင့် သေနတ်ဖြင့်အချက် ၃၀ ခန့်ပစ်ခတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားပြီး မိန်းခလေးတစ်ဦးအားကားတင်ပြေးမှုဖြစ် – Medical Sharing
ချစ်သူများနေ့၌ အချစ်ကြောင့် သေနတ်ဖြင့်အချက် ၃၀ ခန့်ပစ်ခတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားပြီး မိန်းခလေးတစ်ဦးအားကားတင်ပြေးမှုဖြစ်
February 14, 2020 Dr Mrs Mg
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ချစ်သူများနေ့၌ အချစ်ကြောင့် သေနတ်ဖြင့်အချက် ၃၀ ခန့်ပစ်ခတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားပြီး မိန်းခလေးတစ်ဦးအားကားတင်ပြေးမှုဖြစ် – ၂၀၂၀ ဖေ ၁၄ ရက် ၊ ချစ်သူများနေ့
ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်ပထုန်မြို့လယ်ခေါင်တွင်အမျိုးသား ( ၂ ) ဦးမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ဖေဖဝါရီလ ၁၄ ရက် ချစ်သူများနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် သေနတ်ဖြင့်ချိန်ရွယ်ကာ နေအိမ်ခြံစည်းရိုးအားသေနတ်ဖြင့်အချက် ၃၀ နီးပါးမွှေ့ရမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှကျည်ခွံနှင့်ကျည်ဆံများသက်သေခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းကာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေဆဲဟုသိရ ။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့်ခပ်လှမ်းလှမ်းမှမျက်မြင်သက်သေတစ်ဦး၏ပြောကြားချက်အရ ဆလွန်းကားအဖြူရောတစ်စီးပေါ်မှာ ဖက်တီးတစ်ယောက်ဆင်းလာပြီး ဆိုင်ရှေ့လမ်းမတွင် ” ကားသော့ပေးမလား ? မပေးဘူးလား ? အိမ်ထဲဝင်ယူရမလား ? ” ဟုမေးမြန်းစဉ် အမျိုသမီးမှ ” ဒီမှာစောင့်…သွားယူပေးမယ် ” လို့ပြောပြီးမဆုံးခင် အမျိုးသမီးပယအားသေနတ်ချိန်ရွယ်ပြီး အိမ်ခြံစည်းရိုးကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီး အမျိုးသမီးအား ပွေ့ချီ၍ ကားထဲဝင်သွားခဲ့သည် ။
ထို့နောက်သူနှင့်အတူပါလာသည့် ငပိန်တစ်ကောင်သည် အိမ်ခြံစည်းရိုးနားသွားပြီးသေနတ်ဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာခြံစည်းရိုးကိုမွှေ့ရမ်းပစ်ခတ်ပြီး ဝတုတ်နှင့်အတူကားမောင်းထွက်သွားသည်ဟုသူမြင်သမျှပြောခဲ့သော်လည်း ဝေးနေ၍ ယာဉ်နံပါတ်အားမမြင်မိလိုက်ကြောင်းဆိုသည် ။
သူ၏အထင်မှာ လူမှုရေးကိစ္စများကြောင့် ချစ်သူများနေ့တွင် သဝန်တိုမှုများဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးသည် အသက် ၃၆ အရွယ်အိမ်ထောင်ကွဲတခုလပ်အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီးသူနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သည်မှာ ၂ လခန့်သာရှိသေးသည်ဟုသိရ ။
ယနေ့မနက်ကလည်း ဘန်ကောက်မြို့ ပထုမ်းဝမ်းမြို့နယ် ကျူလာလောင်ကွန်လမ်းအမှတ် ၁၀ တွင် ယခုကဲ့သို့ သေနတ်ဖြင့်အချက်ပေါင်း ၃၀/၄၀ ခန့်မိုးထောင်ဖောက်သူကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိရသည် ။
ထိုငျးနိုငျငံတှငျ ခဈြသူမြားနေ့၌ အခဈြကွောငျ့ သနေတျဖွငျ့အခကျြ ၃၀ ခနျ့ပဈခတျမှုထပျမံဖွဈပှားပွီး မိနျးခလေးတဈဦးအားကားတငျပွေးမှုဖွဈ – ၂၀၂၀ ဖေ ၁၄ ရကျ ၊ ခဈြသူမြားနေ့
ထိုငျးနိုငျငံ နခှနျပထုနျမွို့လယျခေါငျတှငျအမြိုးသား ( ၂ ) ဦးမှ အမြိုးသမီးတဈဦးအား ဖဖေဝါရီလ ၁၄ ရကျ ခဈြသူမြားနေ့ နလေ့ညျပိုငျးတှငျ သနေတျဖွငျ့ခြိနျရှယျကာ နအေိမျခွံစညျးရိုးအားသနေတျဖွငျ့အခကျြ ၃၀ နီးပါးမှရေ့မျးပဈခတျမှုကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားမှကညျြခှံနှငျ့ကညျြဆံမြားသကျသခေံအဖွဈသိမျးဆညျးကာအမှုမှနျပျေါပေါကျရေးအတှကျစုံစမျးစဈဆေးမှုမြားပွုလုပျနဆေဲဟုသိရ ။
အခငျးဖွဈပှားသညျ့ခပျလှမျးလှမျးမှမကျြမွငျသကျသတေဈဦး၏ပွောကွားခကျြအရ ဆလှနျးကားအဖွူရောတဈစီးပျေါမှာ ဖကျတီးတဈယောကျဆငျးလာပွီး ဆိုငျရှလေ့မျးမတှငျ ” ကားသော့ပေးမလား ? မပေးဘူးလား ? အိမျထဲဝငျယူရမလား ? ” ဟုမေးမွနျးစဉျ အမြိုသမီးမှ ” ဒီမှာစောငျ့…သှားယူပေးမယျ ” လို့ပွောပွီးမဆုံးခငျ အမြိုးသမီးပယအားသနေတျခြိနျရှယျပွီး အိမျခွံစညျးရိုးကိုသနေတျဖွငျ့ပဈခတျပွီး အမြိုးသမီးအား ပှခြေီ့၍ ကားထဲဝငျသှားခဲ့သညျ ။
ထို့နောကျသူနှငျ့အတူပါလာသညျ့ ငပိနျတဈကောငျသညျ အိမျခွံစညျးရိုးနားသှားပွီးသနေတျဖွငျ့အခကျြပေါငျးမြားစှာခွံစညျးရိုးကိုမှရေ့မျးပဈခတျပွီး ဝတုတျနှငျ့အတူကားမောငျးထှကျသှားသညျဟုသူမွငျသမြှပွောခဲ့သျောလညျး ဝေးနေ၍ ယာဉျနံပါတျအားမမွငျမိလိုကျကွောငျးဆိုသညျ ။
သူ၏အထငျမှာ လူမှုရေးကိစ်စမြားကွောငျ့ ခဈြသူမြားနတှေ့ငျ သဝနျတိုမှုမြားဖွဈနိုငျကွောငျးနှငျ့ အမြိုးသမီးသညျ အသကျ ၃၆ အရှယျအိမျထောငျကှဲတခုလပျအမြိုးသမီးဖွဈကွောငျးသိရှိရပွီးသူနှငျ့ခငျမငျရငျးနှီးခဲ့သညျမှာ ၂ လခနျ့သာရှိသေးသညျဟုသိရ ။
ယနမေ့နကျကလညျး ဘနျကောကျမွို့ ပထုမျးဝမျးမွို့နယျ ကြူလာလောငျကှနျလမျးအမှတျ ၁၀ တှငျ ယခုကဲ့သို့ သနေတျဖွငျ့အခကျြပေါငျး ၃၀/၄၀ ခနျ့မိုးထောငျဖောကျသူကိုဖမျးဆီးစဈဆေးနကွေောငျးသိရှိရသညျ ။
Previous Previous post: သားကြီးဆောရီးကွာ ပြော၍ လည်ပင်းဖက်ကာ ဓါးဖြင့်ထိုးသတ်
Next Next post: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့များတွင်တွေ့ရှိထား (သတင်းမှန်)